Ukuqhaqhaqhaqhaqhabalaza kwaye kuhamba, kuba kutheni kutyhuke kwaye kuhobe? Indlela yokusabela ngayo ngokunyaniseka nokungahambi kakubi kwindlela yakho? Lo ngumbuzo oyingqiqo. Kwaye kucacile ukuba akukho tshintsho kwi-intanethi yolu luhlu "olumnandi" aluyi kutshabalala. Kodwa "into endiyenza xa abantu bandihlambalaza ubusuku bonke" ngumbuzo wokukhonkxa kunye onokuxilongwa.
Kuyinto emangalisa ukuba kumbuzo obuzwe ngokucacileyo: "Nokuba ungayiphendula njani ukunyaniseka nokungahambi kakubi?" Uninzi lwayo luphendule ... "Buyela!" Ziyintoni na ukuphela kweziganeko ezinjalo, ngokuqinisekileyo, ukuqagela. Hayi, ukuba ufuna ukukhawuleza ixesha elide, kodwa akukho ndawo, oku kuyinto enye. Kodwa ukuba ungabantu abangenakunqwenela ukutyiliswa ngodaka, ngoko kulo mzekelo ukulwa nalo mbethe ngomgaqo "ngokuchaswa kwe-scrap no-reception, ukuba akukho nanye i-scrap" engenalusizo. Okokuqala, i-boor iya kuqalisa ngokukhawuleza kwaye isondle ngokusuka kwimilenze yakho. Kwaye okwesibini, uya kuba nomvakalelo ombi ukuba ungadluliselwa kwi-squabble engathandekiyo. Makhe sizame ukufumana iindlela ezisebenzayo ngokuchasene nokunyaniseka, kuxhomekeke kwindawo yale nyathelo.
I-Well kunye ne-obstanovochka
Ukukhwabanisa inombolo 1 - oko kuthiwa itram. Ukuphuhlisa kwiindawo zokudibanisa kwabantu: ukuthutha okukhulu, izithuthi zendlela, izitolo ... Kutheni? Ewe, kuba ngeemeko ezinjalo, i-plaque efihlakeleyo yempucuko, ikhulile nge-sapiens yezinye iibini zeemvakalelo ezibuhlungu, ihamba. Kwaye kwafunyanwa umqolo onobunzima obuvela kwizilwanyana, apho kungekho sigidi esisodwa sele sagcwalisekile. Ngokukhawuleza kuphuma: zalayat, bonise amazinyo-ukutyumla intsimi. Kwaye ukususela apha umzabalazo wendawo phantsi kwelanga awukhohlisi (emva kwemizuzu engama-20 ukuphela kokugqibela, kwaye yonke into iya kuhamba ngonaphakade), akunakunqanda ukukhusela umntu ekupheleni kokuphumelela. Kuyathakazelisa indlela abanye abantu abasabela ngayo ngokunyaniseka nokungahambi kakubi, banqanda ngakumbi kwaye banokuthula.
Unesiqingatha sokuphendulela-ukuphazamisa iimbilini zakho. Vala - xhaphaza ukuba awuzange uyinike ukukhuza kwi-troglodyte. Okubi nakakhulu - ke ixesha elide ukucinga indlela yokuhamba. Ukuphetha? Ekuqaleni, ukuthula okukratshi. Iibilisa ezixhatshazayo, kwaye wena, ekuqwalasela njengomboniso wekhabhinethi yezizathu zentando, ziqwalasela oko kufuneka uphendule. Sekudlulileyo ngaphambi kokuhlukana, uhlawule kwaye uhlazise ngokucacileyo imbono yakho. Uze uphume, ujabule ngokuphumelela kokuziphatha.
Ukukhwabanisa inombolo 2 - "ukuhlahlela". Ukusuka kwabasebenzi bezinto ezibalulekileyo, amagosa, amapolisa, abalindi bezokhuseleko ... Le yimeko yokuqala yembuyekezo yokunyaniseka kwabo ngokwenene - ngokuthotywa kwabanye.
Ekubuntwaneni kwam ndibetha. Bandihlekisa esikolweni. Umfazi akawanelisi. Konke oko. Indlela. Into ephambili - ungayifumani. Ukuba zonke ezi mbono kunye neengxaki ze-tirade zikhokelwa kuwe. Esi sidalwa siziphatha ngale ndlela kumntu wonke. Ezi ziingxaki zakhe ezisondeleyo. Yaye uqaphela ukuba umzekelo "wawungaphantsi kobuntwaneni", kwaye uziphatha ngayo - ngokufanelekileyo. Ngengqiqo yokuba akukhathaleki ukuba ucingisisa ngoku, kubalulekile - ukuyibuyisela phantsi kwaye uyifumane. Ngaba abahlobo bakho baphendule njani ngokunyaniseka nokungahambi kakubi, umzekelo? Kwamanye, kukho ukubethelwa okuthe ngqo kunye nento ekhohlakeleyo: "Oo, nguwe kuphela onokuyigqiba!" Abanye babo baxhamla ngamandla akho, udibaniso kumaphephandaba kunye noorhulumente. Zive apho kukubuthathaka kwakhe.
Ukugqithisa # 3 - isitayela somsebenzi. Kukho uluhlu lweentloko apho uxinzelelo kubasebenzi, ukunyaniseka kunye nokuhlambela-indawo yokuhlala. Indlela. Ngaba unenhlanhla ukuhlangabezana nale nto? Khawuleza uqiniseke ukuba oku okwethutyana. Ukuba awuyi kuba naye de ube ngumhlala-phantsi, kodwa uzenzele indawo epholileyo. Okwangoku, yakha ukukhusela kwengqondo, isikhokelo sokucinga: "Masizikhuphe, njengemvelaphi, njengemvula yamanzi kubantu abaqhelekileyo." Ukuba ukhubekile kwaye uhlambalaza ngokukhawuleza, khawuleza ulungise ngandlela-thile-okanye ubuncinane uzenzele. Unayo i-dictaphone kwideskiti yakho, kwaye kukho amangqina amathathu kufuphi: ngaba unayo nayiphi na ingxaki? U-Hama akadingeki ukuba amemezele, kodwa kufuneka umbonise ukuba ungayithuthuli phambi kwakhe. Emva kwakho konke, ufumene ukuba yayiyilungu lezilwanyana. Kwaye izilwanyana zivakalelwa kakuhle-okanye, ngokuchaseneyo, amandla.
Imvakalelo engebiyo yomntu kunye nokunyaniseka
Indlela yokufumana umntu ukuba abe nosana
Umahluko phakathi kwamadoda kunye namantombazana
Indlela yokuxhatshaza umntu ukuba agijime kumama wakhe onke?
I-Squids kunye neetamatato kunye neetatata ezincinane
Iinkqubo zokuvavanywa kweSikolo: iinkonzo kunye neengxaki
Kuthatha ixesha elingakanani ukulibala indoda
Unina kaYulia Vysotskaya watsho ngobudlelwane bakhe nentombi yakhe noAndrei Konchalovsky
Ucocekile kwaye ukhululekile ukucoceka